Ahoana no fahazoana alalana fitetezam-paritany? Misy ny fanamarinana fahazoan-dàlana amin'ny alàlan'ny e-Government ve? | RayHaber | raillynews
HomeTORKIACentral AnatoliaAnkara 06Ahoana no fahazoana alalana fitetezam-paritany? Misy ny fanamarinana fahazoan-dàlana amin'ny alàlan'ny e-Government ve?
30 / 03 / 2020 Ankara 06, Central Anatolia, ANKAPOBENY, Airports, Highway, Tire Wheel Systems, Headline, TORKIA
Fomba fahazoana antontan-taratasy momba ny fahazoan-dàlana mitety faritra?
Ahoana no fahazoana alalana fitetezam-paritany? Fahazoana fanamarinana fahazoan-dàlana amin'ny alàlan'ny E-Government? Fangatahana hahazoana fahazoan-dàlana fitsangatsanganana? Iza no mahazo ny antontan-taratasy fitsidihana Travel Permit?
Ny filoha Recep Tayyip Erdogan dia nanao ny fanambarana hoe "Ny fitsangantsanganana an-kibo dia miankina amin'ny alalana avy amin'ireo governora" mikasika ny fahazoan-dàlana mitety varotra. Araka ny boribory ao amin'ny tranokalan'ny ministeran'ny atitany; Tsy ho tanteraka ny fandehanana fiara fitaterana an-tery, afa-tsy ny olom-pirenena izay manana toe-javatra ekena ho an'ny governora. Ny olom-pirenena izay maty tamin'ny havana voalohany na nanana aretina mafy ary ny olom-pirenena izay tsy manana trano hipetrahana, indrindra amin'ny dimy ambin'ny folo andro farany, dia afaka mihatra amin'ireo governemantan'ny governemantan'ny distrika na ny governemantan'ny distrika hahazoana fahazoan-dàlana amin'ny fitsangatsanganana.
Ankoatr'izay, ireo izay manamarina ny fandraisan'izy ireo ny fizotran'ny famokarana sy famatsiana avy amin'ny efitrano malalenta mifandraika amin'izany, ary ireo izay mpiasam-panjakana ambony sy mpamatsy tolotra ho an'ny daholobe dia tsy hanana fameperana fivezivezena.
INONA NO MBA HAMPITANANA TENA NATAO INDRINDRA?
Olom-pirenena izay voatery mitety tanàna eo amin'ny tanàna dia hampihatra amin'ny Travel Permit Travel, izay hapetraka eo ambany fandrindran'ny governora sy governora distrika ary mangataka antontan-taratasy fitsangatsanganana. Ho an'ireo izay heverina fa mety, ny antontan-taratasy fahazoan-dàlana amin'ny bus bus intercity dia havoakan'ny birao, ao anatin'izany ny lalan'ny fitsangatsanganana sy ny faharetan'ny. Ny drafitry ny fitsangatsanganana bus dia atolotry ny Birao fitaterana fitsangantsanganana ary hampahafantarina ny olona mifandraika amin'izany.
Ny lisitra fitsidihana ny fitsangatsanganana dia manome lisitry ny lisitry ny olom-pirenena izay handeha amina bus, ny findainy ary ny lisitry ny mpandeha, izay ny adiresy dia aseho amin'ny toerana alehany, amin'ny governemantan'ny tanàna hotsidihina. Ny fiara mandeha alàlana dia afaka mijanona eo amin'ny fijanonan'ny fiara fitateram-bahoaka fotsiny amin'ny làlan'ny dia ary azon'izy ireo maka ireo mpandeha alain'ireo governora amin'ireo faritany izay ijanonany, raha misy ny fahaiza-manaon'izy ireo. Voarara ny serivisy fitaterana fiara fitateram-bahoaka amin'ny bisy.
ARA-BAIBOLY TSY MISY TOKONY HAMPISEHANA KOKOA IANAO INDRINDRA?
Nanambara ny biraon'ny fanovana Digital an'ny filoham-pirenena fa azo alaina amin'ny e-Government manomboka izao ny Travel Permit Travel. Tao anatin'ny kaonty nataony tao amin'ny kaonty Twitter nataony hoe: "Ny olom-pirenentsika izay manao fitsidihana ny coronavirus fepetra dia tsy mitaky intsony any amin'ny governemantan'ny distrika. Ny fangatahana Travel Permit dia ao amin'ny vavahadin'ny e-Government.
Ampiharo amin'ny vavahadin'ny e-governemanta
Hatolotra ny Birao Fahazoan-dàlana fitsangatsanganana ny valim-pifandraisana ary hodinihin'ny Birao.
Aorian'ny fanombanana ny talen'ny Travel Permit Board, dia hampahafantarina amin'ny alàlan'ny SMS ireo mpangataka hoe "efa nekena ny fangatahana nataonao" na ny fandavana ny fangatahana nataonao.
Ireo olompirenena izay ekena ny fangatahana dia ekena ao amin'ny fampiharana Desks noforonina tao amin'ny toera-piaramanidina na seranam-piaramanidina, aorian'ny fanamarinana amin'ny isa TR ID azy ireo.
Fiaramanidina sy fitateram-bahoaka tsy misy fahazoan-dàlana amin'ny fitsangatsanganana
Tsy misy fahazoan-dàlana momba ny tetik'asa momba ny drafitr'asa momba ny fitantanam-panjakana ao amin'ny Şanlıurfa
Fanamarihan'ny SRC ihany koa amin'ny e-governemanta
TCDD Transportation Co. ISKUR dia handroba ny mpiasa!
Pamukova Fitifirana Vita Tamin'ny Taona 15 Nandalo ny lesona saingy tsy noraisina ny lesona
Tapakila YHT an-tserasera misy ankehitriny
Ny minisitry ny famatsiam-bola alemana Schaefer dia nahita maty noho ny haingam-pandeha avo lenta
Hifandray amin'ny tontolo amin'ny alalan'i Mersin i Konya
Ny kabinetra iraisam-pitaovan'ny cable dia hahatratra ny tampon'ny ranomasina
Nitsambikina tamin'ny alalan'ny fiara ny glamour teo ambonin'ny tamba-jiro tao Samsun
miaraka Eoropa Çerkezköy Trade Via
Ny maha-zava-dehibe ny fitaterana lalamby eo ambonin'ny Bay Bridge
Olana tokana, manohitra ny fanesorana ireo minibus ao amin'ny GMK Boulevard